सार्न Holm गर्न? | Holmbygden.se
एक सुखद देहात उत्प्रेरित तपाईं वा तपाईंको परिवारको विचार गर्न? स्वागत!
प्रश्न र चिन्ता हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्. शायद तपाईं यसलाई बच्चाहरु र यहाँ बढ्न हो के बच्चाहरु संग परिवार कुरा गर्न चाहनुहुन्छ. शायद तपाईं कुनै पनि प्रकारको व्यापार परिसर आवश्यक? हामी तपाईंलाई मद्दत!
गर्न Sundsvall र यसको environs मा जब यो यात्रा मा तपाईं को सोच / तपाईं? त्यहाँ शहर रुपान्तरितको लागि बसें छन्. तपाईं कार चलाउनु हुनेछ, यो टिप्पण कि यात्रा लागत मूल्य हुन सक्छ सस्ता आवास लागत द्वारा अफसेट छ र यो मात्र लिन्छ 35 Stan सम्म मा मिनेट.
नियमित यात्रा र बस विकल्पहरू थप पढ्नुहोस् यहाँ.
तपाईं केहि विशेष आवास को लागि देख रहे भने हामीलाई भन्नुहोस्. कहिलेकाहीं यो पनि एक पटक मा थप ठाउँ र कुनै पनि कारण लागि वेबसाइट मा पोस्ट छैन भनेर ती हुन सक्छ. हामी सीधा आफ्नो प्रश्नको जवाफ भने, हामी तपाईंलाई बाहिर फेला पार्न मद्दत. सजिलो तरिका लेख्न वा हामीलाई कल गर्न छ, यहाँ हाम्रो सम्पर्क विवरण हेर्नुहोस्.
तपाईं एक अधिक सामान्य प्रश्न खुला सोध्न चाहनुहुन्छ, तपाईं पनि तल मा लेख्न सक्छ टिप्पणी क्षेत्र.
स्टकहोम पढ्न जोडी फेला यसको भाग-समय बासिन्दा "स्वर्गदूतहरूको हाउस" Holm मा.
नयाँ विज्ञापन आवास को लागि पोस्ट जब तपाईं एउटा इमेल र / वा एसएमएस प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ?
आफ्नो विवरण तल भर्नुहोस्, तपाईं सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ रूपमा.
फोन नम्बर (एक वा बढी प्रविष्ट):
सम्भव व्यक्तिगत सन्देश, तपाईंको इच्छा वर्णन गर्नुहोस्:
फिर्ता आवास सूची गर्न